Midowga Yuruub oo si kulul u cambaareyey Qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Midowga Yuruub oo si kulul u cambaareyey Qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho.
Ururka Midowga Yuruub ayaa goor dhowayd si kulul u cambaareyey Qaraxi barkhadnimadi maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya kaas oo lala beegsaday Hotel ay ku sugnaayeen masuuliyin ka tirsan DFKM ah.
Xogheyaha cusub ee Siyaasada arimaha dibada ee Midowga Yuruub Catherine ayaa ku tilmaamtay qaraxaas mid fuleynimo ah isla markaana looga baahanyahay Beesha Caalamka in ay jawaab ka bixiyaan.
”Waxaana si kulul u cambaareynaaya weerarkaas fuleynimada ah oo lala eegtay Bulshada rayidka ah oo ay ku jiraan Ardayda,Daqaatiirta iyo Saxaafiyinta”,ayay ku tiri war Saxaafadeed.
Waxaana ay sheegtay in ay aad uga argagaxday weerarkaas,waxaana ay tacsi u dirtay DFKM ah ee Soomaaliya iyo Eheladi dadki ugu geeriyooday qaraxa.
Mr.s Ashton ayaa sheegtay in Ururka Midowga Yuruub u taageero mar weliba siinaayo DFKM ah ee Soomaaliya oo dhan weliba,waxaana ay sheegtay in qaraxa maanta lala beegsaday Wasiirada ka tirsan DFKM ah ay qayb ka tahay dhibaatada iminka ka taagan gudaha dalka Soomaaliya.
Si kastaba qaraxa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku dhintay 3-wasiir oo ka tirsan DFKM ah oo kala ahaa;Wasiirka Caafimaadka Qamar Aadan Cali,Wasiirka Waxbarashada Axmed C/laahi Waayeel iyo Wasiirka Tacliinta Sare iyo Hidaha dhaqanka Pro:Ibraahim Xassan Cadow,waxaana ku dhaawacymay Wasiirka Ciyaaraha iyo dhalinyarada Saleebaan Rooble kuwaas oo ka qayb galaayay xaflad qalin jabin ah.